Kooxda Elman oo soo tiigsatay kaalinta saddexaad ee horyaalka Somali Premier League, xilli uu saddexleey galabta u saxiixay Maxamed – Gool FM
(Muqdisho) 09 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Elman ayaa soo tiigsatay kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka Somali Premier League, kaddib markii uu galabta saddexleey u saxiixay Maxamed Cusmaan.
Elman waxa ay ka adkaatay kooxda qarka u saaran inay u laabato heerka labaad ee Gaadiidka, waxaana kulankan oo ka dhacay garoonka Banaadir ee degmada C/casiis uu ku dhammaaday 3-1 looga adkaaday Gaadiidka.
Kulankan ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaaminaysay kooxda Gaadiidka, naadiga Elman ayaana qeybta hore gool looga naxsaday.
Qeybtii labaad ee ciyaarta kooxda Elman ayaa dardar xooggan la soo gashay, waxaana ay saddexleey u saxiixay oo guuldarro ka badbaadiyey ciyaaryahankeeda Maxamed Cusmaan.
Ciyaarta ayaa ku soo dhammaaday 3-1 ay ku adkaatay kooxda Elman oo sidaas ku soo tiigsatay kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka Somali Premier League, iyadoo leh 23-dhibcood.
Kooxda guuldarrada la kulantay galabta ee Gaadiidka ayaa qarka u saaran inay u laabato heerka labaad, iyadoo horyaalka Somali Premier League ka hoggaaminaysa halka ugu hooseysa.